Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziNgcwele zikaSanta Lucia » Ngubani umphathiswa omtsha weSanta Lucia wezoKhenketho?
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Iindaba eziNgcwele zikaSanta Lucia • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Saint Lucia Amagama Umphathiswa Wezokhenketho Omtsha
UGqr. Ernest uqeshe uMphathiswa omtsha wezoKhenketho, uTyalo-mali, amaShishini oBugcisa, iNkcubeko kunye neNkcukacha.
Owayesakuba ngunozakuzaku waseSanta Lucian umele ummandla weCastries South kwiNdlu yeNdibano yeQela lezaBasebenzi laseSanta Lucia.
UGqirha Hilaire usebenze iSanta Lucia njengoKhomishinala oPhezulu e-United Kingdom ukusukela ngo-2012-2016.
UGqirha Hilaire ulandela izifundo zakhe ze-Ph.D. kwiSikolo seLondon sezoQoqosho.
Ohloniphekileyo uGqr. Ernest Hilaire wafungiswa kwiKhabhinethi yabaPhathiswa yaseSt.
Owayesakuba ngummeli woSanta uLucian umele ummandla weCastries South kwiNdlu yeNdibano yeQela lezaBasebenzi laseSanta Lucia.
Njengenxalenye yoku-odola ngokukhawuleza ishishini, uMphathiswa uzakubiza iintlanganiso kunye necandelo lezokhenketho ukubandakanya iSebe lezoKhenketho, IGunya lezoKhenketho laseSanta Lucia nemibutho yecandelo labucala ukufumana ukubonakala kwizicwangciso ezikhoyo. Ezi ntlanganiso ziya kubonelela ngengqondo efanelekileyo kwaye ziya kuqinisekisa ukuba isicwangciso-qhinga esibekiweyo sokunyusa iSanta Lucia yenye yeendawo ezibeka indawo yokubuyela kwimeko yesiqhelo kunye nokukhula okuzinzileyo.
Ethetha ngokuqeshwa kwakhe kwiKhabhinethi yabaPhathiswa, oHloniphekileyo. Ugqirha Hilaire uthe: “Ezokhenketho zezona zinto ziphambili eziqhuba uqoqosho lwe-Saint Lucian olomeleza indlela esisebenza ngayo, sikhuthaza uphuhliso lwezoqoqosho kwaye sidala imisebenzi. Ke ngoko, ngenxa yamava am, kunye nokudityaniswa kweephothifoliyo zam ezisebenza ngokunxibelelene nemveliso yethu yezokhenketho, ndijonge phambili ekusebenzeni ngentliziyo iphela, kugxilwe ekuqiniseni icandelo lezokhenketho kwaye ndibeke abantu embindini wecandelo.
Hon. UGqirha Hilaire usebenze uSanta Lucia njengoKhomishinala oPhezulu e-United Kingdom ukusukela ngo-2012-2016 kwaye wongezwa kumava akhe kwezopolitiko ziindawo zemidlalo, ezolawulo kunye nobudlelwane bamazwe aphesheya. Unerekhodi kulawulo lweCricket kwaye usebenze njengeGosa eliyiNtloko lesiGqeba seBhodi yeQakamba yaseWest Indies.
Uphethe isidanga seBachelor of Science (Double Major) kwiCave Hill Campus yeDyunivesithi yaseWest Indies kwiPolitiki yeSayensi nakwiNtlalontle. Ukwafumene isidanga se-Master of Philosophy kwi-1995, ngokwahluka kubudlelwane bamanye amazwe, kwiKholeji yaseDarwin, kwiDyunivesithi yaseCambridge, eNgilani, waqhubekeka wenza i-Ph.D. kwiSikolo seLondon sezoQoqosho.
Ohloniphekileyo uGqr. Ernest Hilaire ukwaphethe iDiploma yesiGqeba kuThetha-thethwano kunye nokusonjululwa kwembambano kwiYunivesithi yaseTours Dame.
IGunya lezoKhenketho laseSanta Lucia limnqwenelela okuhle kodwa ngexesha lesikhundla sakhe kwaye sithembisa ngenkxaso yethu kuphuhliso oluqhubekekayo lwegama likaSanta Lucia phantsi kobunkokheli bakhe.
UJackson Suber: Ukuphumelela okumangalisayo kwi-White Sands Bahamas NCAA...
Ijaji laseburhulumenteni limisa isitofu sokugonya i-United Airlines COVID-19 ...